पश्चिमी वायुको प्रभाव : वर्षा र हिमपातको सम्भावना - अभियान खबर
काठमाडौं। पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभावले वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेकाले पश्चिमी भेगका एक-दुई स्थानमा हल्का वर्षा तथा मध्य र पश्चिमी उच्च हिमाली भेगमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाल जनाएको छ।
सोमबार फेरि नेपालको पश्चिमी भूभाग हुँदै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली विकसित भएकाले पुनः वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको मौसमविद् मञ्जु बासीले बताए। “आज उक्त प्रणालीको प्रभावले पश्चिमी भूभाग सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पश्चिम र मध्यका उच्च पहाडी भेगमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ”, मौसमविद् बासीले भने।
मौसमविद्का अनुसार यस वर्ष मौसमी प्रणालीको प्रभावले केही दिन मौसम खुला हुने र फेरि बदलीसहित वर्षा र हिमपात हुनेजस्ता अवस्था दोहोरिरहेको छ । हाल देशको पश्चिमी भूभागमा सामान्य बदली तथा अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ ।
तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु-कुहिरो लागिरहेको र त्यो अपराह्नपछि विस्तारै हटेर जाने जनाइएको छ। राति देशका पश्चिमी भूभागलगायत मध्य र पूर्वी पहाडी भूभागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही पूर्व र मध्यका तराई भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ।
देशभर बम आंतक, कहाँ के भयो ?
Posted on June 25, 2019 Author Nirajan Abhiyaan
बिहान ८ बजेसम्म मुलुकमा ३० स्थानमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ । ३ स्थानमा बम विस्फोट भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । विम विस्फोटमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले कास्कीबाट १ जना विप्लव समूहको कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । किर्तिपिरको नयाँबजारको गेट छेउमा बिहान ५:०५ बजेको समयमा रातो झण्डाले बेरिएको भित्र बोतलजस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु […]
कुन राशि भएका व्यक्तिले के काम गर्ने, के नगर्ने !
Posted on May 26, 2019 May 26, 2019 Author Nirajan Abhiyaan
मेष: मेष अन्तरिक्षको प्रथम राशि हो जसको मालिक मङ्गलग्रह हो र यसको स्वभाव अग्निको जस्तै हुन्छ । मङ्गल ग्रहलाई ज्योतिष विज्ञानले सेनापतिको रूपमा लिएको छ । त्यसैले मेष राशि भएका व्यक्तिहरू सेना, प्रहरी र अत्यधिक मात्रामा ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने क्षेत्रमा सफल हुन्छन् । डाक्टर, पाइलट र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित काममा लागेमा यिनीहरूलाई सफलता चुम्न सहज […]
आईफोन ११ सार्वजनिक गर्दै एप्पल, यस्ता छन् विशेषता
Posted on August 3, 2019 Author abhiyaan
काठमाडौं । एप्पलले आफ्नो नयाँ आईफोन सेप्टेम्बर महीनामा सार्वजनिक गर्ने भएको छ । एप्पलले आईफोन ११ का साथै नयाँ आईप्याड र नयाँ म्याकबुक सार्वजनिक गर्न लागेको हो । नयाँ आईप्याडमा १०.२ इन्चको डिस्प्ले स्क्रिन र म्याकबुकमा १६ इन्चको स्क्रिनको प्रयोग गरिनेछ । एप्पलका निकट विश्लेषकका अनुसार नयाँ आईफोन ११ मा एप्पल पेन्सिलको सपोर्ट पनि मिल्नेछ […]